गर्मी दाना के हो? वयस्क मा उपचार
sudamen मात्र शिशुहरू मा हुन्छ कि स्टीरियोटाइप तापनि यो अक्सर वयस्क हुन्छ। डराएको - अक्सर यो hyperhidrosis एक परिणाम हो। उहाँले, बारी मा, किनभने हृदय प्रणाली समस्या, साथै मृगौला रोग र विकार को endocrine प्रणाली को को उत्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ। एउटै सर्त तात्दै र कठिन काम गर्न सक्छ। त्यसैले तपाईं एक गर्मी दाना छ भने, त्यसपछि तपाईं जान्नु आवश्यक: वयस्क मानिसहरूलाई को उपचार यसको भिन्न को एक परिभाषा संग सुरु हुन्छ। यो उपचार को प्रभावकारिता निर्भर यो छ।
सबैभन्दा अहानिकारक फारम - क्रिस्टल sudamen। वयस्क मा उपचार सामान्यतया आवश्यक छैन। यो रातो बुलबुले को अधिकता को शरीर मा उपस्थिति द्वारा विशेषता छ। तिनीहरूले सामान्यतया केही घण्टा वा अर्को दिन पछि आफ्नै गायब। यो अत्यधिक लोड मा पसिना ग्रन्थीहरूको एउटा प्रतिक्रिया छ। तर कुनै दुखाइ छ।
अर्को कुरा, यदि त्यहाँ एक रातो आशुक्रोधी गर्मी थियो। यस मामला मा वयस्क मा उपचार सञ्चालन गरिनु पर्दछ। यो कुरा यो सिर्फ एक dermatitis, छाला को माथिल्लो तहहरू एक गम्भीर सुनिंनु छैन भन्ने छ। अक्सर, यो armpits, कुहिनो creases, कमर र तिध्रा बिचको भाग, को मुर्कुट्टा को पक्ष असर गर्छ। खतरा भिजेको घाउ को गठन मा निहित। तपाईं समसामयिक उपचार प्रदान भने, प्रक्रिया अन्य क्षेत्रमा असर गर्नेछ। यो रोग संग, वयस्क मा रातो आशुक्रोधी गर्मी उपचार दुई हप्ता सम्म लाग्छ।
यो कहिले काँही गर्म जलवायु प्रतिक्रिया रूपमा खडा जो दानेदार sudamen (रातो आशुक्रोधी गर्मी बढी गंभीर फारम) छ। एक मानिस चिसो मौसममा आफ्ना सबै जीवन बसोबास भने, पसिना ग्रन्थीहरूको लोड सामना गर्न सक्षम हुने छैन, र यो अप्रिय लक्षण को उपस्थिति गर्न जान्छ। तसर्थ, सावधानी गन्तव्यहरू चयन गर्न प्रयोग गर्नुपर्छ।
विशेष गरी यदि अनुहार मा एक गर्मी दाना त्यहाँ छ, उपचार तुरुन्तै सुरु गर्नुपर्छ। यो रोग को विकास रोक्न हुनेछ। यो एक त्वकरोग परामर्श गर्न राम्रो छ। उहाँले विशेष औषधीको को एक पाठ्यक्रम नियुक्त गर्नेछ। एक सामान्य नियम जस्तै, प्रभाव सुखाने गर्न nanodiamonds उपयोग गरदै समावेश गर्न। उपचार समयमा, यो एक दिन चार पटक सम्म नुहाउनु महत्त्वपूर्ण छ। रोग प्रभावित छाला को क्षेत्रहरु, जो विरोधी-भडकाऊ कार्यहरू छ हर्बल infusions, संग उपचार गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि, कैलेंडुला, chamomile, ऋषि र यति मा।
त्यहाँ एक थियो भने गर्मी दाना, उपचार वयस्क पनि बाहिर छ पोटासियम Permanganate संग स्नान प्रयोग गरेर। कि पछि, प्रभावित क्षेत्रमा प्रक्रिया गर्न आवश्यक बेबी पाउडर। Camphor खुजली या कम गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ मेन्थल तेल। वा तिनीहरूलाई मलम किन्न। रोग रोगजनक संस्कृति को कारण भने, डाक्टर एन्टिबायोटिक सल्लाह दिन्छन् हुनेछ।
साधारण - यो छ शिशुहरू मा गर्मी दाना। उपचार यस मामला मा विशेष जटिल छैन। नियम, यो वयस्कहरूको लागि देखाइएको मिल्दोजुल्दो छ। एक हर्बल स्नान, सावधान स्वच्छता छ। यो पनि बच्चाको वस्त्र गर्न लायक तलब ध्यान छ। यो प्राकृतिक कपडे बनेको हुनुपर्छ। छैन बच्चाहरु भन्दा-wraps गर्छन्। यसबाट तिनीहरूले धेरै पसिना, र त्यो तिनीहरूलाई थप आशुक्रोधी गर्मी दिन्छ। आमाबाबुले एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य - आफ्नो बच्चा व्यक्तिगत स्वच्छता सिकाउन। गंभीर अवस्थामा, वयस्क मा आशुक्रोधी गर्मी सर्जरी खर्च। अपेक्षाकृत आधुनिक विधि बोटक्स इंजेक्शन रूपमा छलफल गर्न सकिन्छ। यो पसिना ग्रन्थीहरूको कम गर्न मद्दत गर्छ।
Ekzotservitsit - यो के हो? कारण, लक्षण र उपचार
शरीर मा फलाम को कमी को संकेत। फलाम कमी: गराउँछ, उपचार
ठेउला कस्तो व्यवहार गर्न
Appendicitis विद्रधि - यो के हो?
तपाईं एउटा अप्रिय खुट्टा गंध ग्रस्त? कसरी सरल तरिका को छुटकारा प्राप्त गर्न: केही सिफारिसहरू
घरमा गुलाबी सामन कसरी नमस्कार गर्ने
10 सौर्य प्रणाली को ग्रह - यो अवस्थित?
र तपाईं ग्रीनहाउस मा किन तीतो खीरे थाहा?
भ्याकुम क्लिनर सैमसंग SC4520: एक सिंहावलोकन, विनिर्देशों, निर्देशन, सुविधा र समीक्षा
युट्युबमा एकपटक र सबैको लागि विज्ञापन अक्षम पार्ने
ग्रेड अस्तर र आफ्नो मतभेद
सुझाव र चाल: Honeysuckle कसरी प्रोपेगेट गर्न
कला मा एक निबंध। विषय मा निबंध-तर्क: "? साँचो कला के हो"
प्रार्थना, "पिता हाम्रो" मा रूसी धेरै को अर्थमा अनुपलब्ध
रगतमा रातो रक्त
कसले बास्केटबल को आविष्कार गर्यो?
मैक्सिम भिटर्गन विटर्गन इमानमानुएलको छोरा हो। जीवनी, चलचित्रोग्राफी, व्यक्तिगत जीवन